तुलसीपुरलाई स्मार्ट सीटी बनाउने हाम्रो योजना छ – Janaubhar
तुलसीपुरलाई स्मार्ट सीटी बनाउने हाम्रो योजना छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २४, २०७४ | 387 Views ||
मेयर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले उपमहानगरलाई स्मार्ट सीटीको रुमा विकसित गरिने बताउँछन् । अहिले तुलसीपुरलाई नमुनायोग्य शहर बनाउन आफूहरुले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तुलसीपुर उमहानगरको काम, प्राथमिकता, ठूला योजनाको अवस्था, चक्रपथ निर्माणलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर उपमहानगरका मेयर घनश्याम पाण्डेसँग नौलो जनउभार साप्ताहिकका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले के गर्दैछ ?
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरुलाई समयमै सही र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । हरेक क्षेत्रको बजेट सञ्चालन र कार्यक्रम गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही काम ढिलो भएको महसुस जनतालाई हुन सक्छ तर हामीले छुट्याएको बजेट सही ढंगले सही समयमा पूरा गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेका छौं ।
हामीले पछिल्लो समय स्थानीय तह सञ्चालनका लागि जुन ३६ वटा कानुन स्थानीय तहमै निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसको काम गरिरहेका छौं । यसका साथै यस क्षेत्रको शिक्षाको अवस्था सुधार्नका लागि हरेक सामुदायिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन पनि आरम्भ गर्दैछौं, त्यसको पूर्वाधार बन्दैछ । वडा–वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्थापनामा हाम्रो ध्यान गइरहेको छ । कृषि र पशुपालनमा यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामीले प्रविधिगत सहयोग, आर्थिक सहयोग, वजारीकरण जस्ता विविध कुरामा काम गरिरहेका छौं ।
भर्खरै तुलसीपुरलाई स्पोर्टस् सिटीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँगको सहयोग र सहकार्यमा खेल क्षेत्रमा काम पनि गरिररहेका छौं । तुलसीपुरलाई नमुनायोग्य शहर बनाउनका लागि हामीले विभिन्न काम गरिरहेका छौं । काम आरम्भ गरेर मात्रै जनताले फरक महसुस गर्न सक्दैनन्, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले पूरा पनि गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं ।
उपमहानगरको प्राथमिकता के हो ?
हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको यस ठाउँको समुन्नति, विकास र समृद्धि नै हो । तर यसका लागि कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै काम गरेर सम्भव छैन । नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, भौतिक निर्माण आदि सबै कुरामा जनताले राहत महसुस गर्नुपर्दछ । अहिलेको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको यस उपमहानगरलाई सबैतिर सडक सञ्जालले जोड्ने नै हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरलाई घेर्ने गरी चक्रपथ निर्माणको काम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । यसका साथै जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले सबै काम गर्नुपर्ने तर काुननी हिसाबले केही पनि निर्माण नभइसकेको अवस्थामा अत्यन्त सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
लामो समयसम्म कर्मचारीको भरमा चलेको थियो । जनप्रतिनिधि आउँदा कर्मचारीहरुसँग समन्वय गर्न कत्तिको जटिलता छ ?
यहाँले भनेको कुरामा केही स्वभावगत कुराहरु पनि जोडिएका छन् । हामीले कसरी आफुलाई प्रस्तुत गर्छाैं । कर्मचारीहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । सबैसँग मित्रवत व्यवहार गरेर काम गर्ने न हो । अब यहाँले भनेजस्तो कतिपय सन्दर्भमा केही जटिलता अवश्य पनि आउन सक्छ तर त्यसलाई प्रमुखको हैसियतले किनारा लगाउने जिम्मेवारी मेरो पनि हो ।
अहिले कानुन पूरै नबन्दासम्म कतिपय कुराहरुमा केही विमति अवश्य हुन सक्छ तर विस्तारै कानुन बन्यो भने सबै कुराहरु सामान्य हुँदै जान्छन् ।
अर्को कुरा भनेको जनप्रतिनिधि हरेक कुरामा निरन्तर अपडेट हुनुपर्दछ । सरकारले विभिन्न कानुनहरु बनाइरहेको छ, बनाएका कानुनहरुलाई पनि अपडेट गरिरहेको हुन्छ यस्ता खालका कुराहरुमा अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यस्तो भयो भने पनि समन्वय गर्न सरल हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैले जनताको सेवकका रुपमा आफूलाई लिन सके भने त्यसले समन्वयको वातावरण तय गर्नमा निकै सहजता ल्याउँछ ।
तुलसीपुरमा ठूला योजनाहरु के छन् ?
हामी विकासको चरणमा रहेकाले पनि अहिलेका योजनाहरु धेरैजसो पूर्वाधार निर्माण गर्ने खालका छन् । तथापी हामीले पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने केही महत्वपूर्ण योजना पनि रहेका छन् । जस्तो हामी पाँच वर्षभित्र हरेक उपमहानगरबासीको घरमा धारा होस् भन्ने काममा लागेका छौं । छिल्लीकोटमा केबुलकार सञ्चालन गर्ने हामीले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण योजना हो ।
तुलसीपुरको पहिचानका रुपमा उपमहानगरपालिकाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिफ्टसहितको तुलसी टावर निर्माण पनि हाम्रो योजना हो । यसका साथै यस उपमहानगरलाई स्मार्ट सिटी र स्पोर्टस् सिटी बनाउने पनि हामीले ल्याएको ठूलो योजनाअन्तर्गत पर्दछ । प्राविधिक शिक्षाका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मेट्रो कलेज सञ्चालनको योजना पनि बनाएको छ । हामीसँग अन्य धेरै योजनाहरु पनि छन् तथापि आरम्भमा हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तुलसीपुर पछिल्लो समय यस क्षेत्रकै केन्द्र बन्दैछ यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । आर्थिक बाहेक अन्य साधन स्रोत पनि छन् । अब हामीले काम गर्ने बेला भएको छ । तुलसीपुरलाई समृद्ध बनाउने हो भने हरेक नागरिकले अपनत्व अनुभव गरेर विकासमा साझेदारी गर्नु आवश्यक छ । तुलसीपुर उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि आम नागरिकले जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ । हामीले यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि पर्यटन र कृषिमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । हामीले खेल पर्यटनको विकासका लागि तुलसीपुरको बबईमा “विच गेम” आयोजना गर्दैछौं । त्यसबाट खेल पर्यटनको विकास हुने हाम्रो लक्ष्य हो ।
अब तुलसीपुर–हात्तीखौवा फोर लेन सडक अहिले मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ । निर्माण कम्पनीले समयमै काम गर्न नसक्दा जनताले निकै सास्ती खेपिरहेका छन् । यस्ता कतिपय जटिलता जुन कुरा नगरपालिकाको हातमा छैन यस्ता कुराले पनि हामीले केही डिस्टर्व अवश्य पनि गरेका छन् । यसरी उपमहानगरले मात्रै भन्दा पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले पनि केही भूमिका अवश्य पनि खेल्नुपर्दछ ।
तुलसीपुरमा चक्रपथ निर्माणको कुरा थियो के भयो ?
पूरै उपमहानगरलाई चक्रपथले घेर्ने गरि हामीले नक्सांकनको काम थालनी गर्दैछौं । विभिन्न वडामा सडक निर्माण गर्दा पनि हामीले चक्रपथको कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिरहेका छौं । यो वर्ष चक्रपथ निर्माणका लागि नक्सांकनको पूरै काम सकिन्छ अनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले पूरा गर्नेछौं ।
विमानस्थल सही ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसलाई नियमित गर्न र विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गर्ने के छ योजना ?
तुलसीपुरमा विमानसेवा सञ्चालनका लागि उपमहानगरले विशेष पहल गरेको छ । अहिले सातामा दुई पटक विमानसेवा सञ्चालन भइरहेको छ । बीचमा पाइलटहरु तालिममा भएकाले सातामा एक पटक सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई नियमित बनाउनका लागि केही काम गर्नु जरुरी छ ।
हामीले इन्धन डिपो सञ्चालनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं । यहाँ इन्धन डिपो सञ्चालन हुन सक्यो भने नियमित उडानका लागि सजिलो हुन्छ । पहिलो कुरा इन्धन डिपो नै हो ।
अर्को कुरा विमानस्थलमा ठूला प्रकृतिका जहाजहरु उडाउनका लागि धावन मार्ग पनि अलि ठूलो बनाउनु आवश्यक छ । जग्गाको समस्या नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन हामीले गर्दैछौं । यहाँले चिन्ता व्यक्त गरेजस्तै विमानसेवालाई सुचारु र सर्वसुलभ बनाउनका लागि हामीले छिट्टै नै थप काम गर्दैछौं, यहाँका जनताले छिट्टै यसको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।
Prevएउटा गरिबसँग ‘घुस’ लिँदा १३ जनालाई एड्स
Nextयस्तो रह्यो ५ नं. प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन (फोटो फिचर)